MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardPromotion mm Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: Promotion mm
Swe Thahar FAQs mm
နိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက်မှစပြီး MPT GSM/WCDMA SIM Card အသစ်စတင်အသုံးပြုသူတိုင်းသည် ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို အလိုအလျောက်ရယူထားပြီးဖြစ်၍ ဖုန်းအသုံးပြုမှုများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းထား များအတိုင်းကျသင့်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိတွင် ဆွေသဟာအစီအစဉ်အသုံးပြုနေသူများသည်လည်း နိုဝင်ဘာလ(၂၃)ရက်မှစပြီး အထက်ပါ နှုန်းထားများအတိုင်းကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
2. အခြားအစီအစဉ် Price Plan တစ်ခုကို ပြောင်းလို့ရပါသလား။
ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Price Plan ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်လျှင် Price Plan ပြောင်းလဲမှု အများဆုံးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
3 .ဘယ် price plan ကိုသုံးနေတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသလဲ။
*224#ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Price Plan ကိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 31, 2020 Categories Promotion mm, Voice mm
Shal Pyaw FAQs mm
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 31, 2020 ဩဂုတ် 31, 2020 Categories Promotion mm, Voice mm
Shwe Zagar FAQ update MM
Promotions » Shwe Zagar
၁။ “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ဆိုတာဘာပါလဲ။?
“ရွှေစကား” အစီအစဉ်တွင် MPT သုံးစွဲသူအချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုတိုင်း အသက်သာဆုံးဖုန်းခေါ်ဆိုခနှုန်းထား ၁မိနစ်လျှင် ၁၀ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရွှေစကား အစီအစဉ်ကိုဘယ်လို ရယူနိုင်ပါသလဲ။
*234*4# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး “ရွှေစကား” အစီအစဉ်ကို အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။
၃။ "ရွှေစကား" အစီအစဉ်ကိုဘယ်လို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသလဲ။
MPT မှ မတူညီသော ၀န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို မိတ်ဆက်ပေးလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများသည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ၀န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကို အခမဲ့ပြောင်းလဲရယူအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင် မည်ဖြစ်သည်။
၄။ "ရွှေစကား" အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို ၅ စက္ကန့်ကြာဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ၁၅ စက္ကန့်စာ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ကျသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
၃၁ မှ ၄၅ စက္ကန့် : ၇.၅၀ ကျပ် (excluding tax)
၅။ "ရွှေစကား" အစီအစဉ်ကိုရယူထားပါက အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်များကိုဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မှာပါလား။
၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ MPT ၏ အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်အားလုံးကို “ရွှေစကား” အစီအစဉ်တွင်လည်း ၀ယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1MB လျှင် ၁ကျပ်သာကျသင့်မည့် ပက်ကေ့ချ်များအပါအဝင် အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ် မျိုးစုံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၆။ "ရွှေစကား"အစီအစဉ်ကိုရယူရာတွင် ကန့်သတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာရှိပါသလား။
MPT GSM/WCDMA ဖုန်းများသည် “ရွှေစကား”အစီအစဉ်ကို လျှောက်ထားရယူ နိုင်ပါသည်။
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုသည် တစ်ရက်အတွင်း အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရယူမှုအများဆုံး တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၇။ ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့အစီအစဉ်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်မှာပါသလဲ။
*224# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပါ။ (သို့မဟုတ်) ၁၃၃၁ သို့ BAL ဟု စာတိုပေးပို့ပါ။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 25, 2020 ဩဂုတ် 27, 2020 Categories Promotion mm, Voice mm
MPT Voice Pack FAQs update mm
1. MPT Voice Package ဆိုတာဘာလဲ။?
10Mins Voice Package ၏ သက်တမ်းမှာ ၀ယ်ယူသည့်နေ့၏ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန် (၂၃:၅၉:၅၉နာရီ)အထိ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရက်အတွင်းမှာ 10 Mins Voice Package တွေ အများကြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
2. MPT Voice Package တွေဝယ်ယူထားပါတယ်။ အခြား အော်ပရေတာနံပါတ်ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုကျသင့်မှာပါလဲ။?
3. USSD Code ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုပြီး Voice Package ဝယ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Voice Packageတွေကို ဝယ်လို့မရပါဘူး။?
ဖုန်းလက်ကျန်ငွေမလုံလောက်ပါက MPT Voice Package များကိုဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဩဂုတ် 25, 2020 Categories Promotion mm, Voice mm
A Kyite Pyaw + Voice Pack mm
Promotions » A Kyite Pyaw + Voice Pack
A Kyite Pyaw + Voice Pack
၁။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ဆိုတာဘာလဲ။
အမည် နှုန်းထား မိနစ် အသုံးပြုနိုင်ပုံ သက်တမ်း ဝယ်ယူရန် တိုက်ရိုက်
Voice Pack ၈၅၀ ကျပ် ၁၃၅ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၇ ရက် *600#
Voice Pack ၁၅၀၀ ကျပ် ၂၃၈
မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၃၀ ရက် *600#
Voice Pack ၃၉ ၀၀ ကျပ် ၆၁၉ မိနစ် MPT အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
(ကြိုးဖုန်းအပါအဝင်) ၉၀ ရက် *600#
၂။ ဒီ pack နဲ့အခြား အော်ပရေတာတွေကို ဖုန်းခေါ်လို့ရနိုင်မှာလား။
၃။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack အပြင် ၃၉၉ကျပ် voice pack ကိုလည်းဝယ်ယူထားပါတယ်။ ဘယ် package ထဲကအရင်ဖြတ်မှာပါလဲ။
၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ၏ အသုံးပြုနိုင်သောသက်တမ်းမှာ ပိုနည်းသောကြောင့် ၃၉၉ ကျပ် Voice Pack ထဲက အရင်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးမှ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ထဲမှ ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
၄။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကိုအကြိမ်ရေ မည်မျှဝယ်ယူနိုင်မည်နည်း။
အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို စိတ်ကြိုက် ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
၅။ ယခင် အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ရဲ့မိနစ်နဲ့သက်တမ်းကျန်ရှိချိန်မှာ နောက်ထပ် အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကိုဝယ်ယူပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
မိနစ်နဲ့သက်တမ်းသည် ပေါင်းစည်းသွားမှာမဟုတ်ပါ။ ဝယ်ယူထားသော အကြိုက်ပြော+ Voice Pack
တစ်ခုချင်းစီသည် ယင်းတို့၏ သတ်မှတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင် အသီးသီး ကုန်ဆုံးပါမည်။
၆။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack သည် သက်တမ်းကုန်လွန်သွားသည့်အခါ အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးပါသလား။
အကြိုက်ပြော+ Voice Pack သည် သက်တမ်းကုန်လွန်သွားသည့်အခါ အလိုအလျောက် သက်တမ်းမတိုးပါ။ အသစ်တစ်ဖန်ဝယ်ယူလိုပါက *600# ကို ခေါ်ဆိုပါ။
A Kyite Pyaw + FAQs MM
၆။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အချိန်ထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ မှ ထပ်မံမကြေညာမီအချိန်အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို အကြိမ်ရေ မည်မျှ ဝယ်ယူနိုင်မည်နည်း။
၈။ ယခင်အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ရဲ့ မိနစ်နဲ့သက်တမ်းကျန်ရှိနေချိန်မှာ နောက်ထပ် အကြိုက်ပြော+ Voice Pack ကို ဝယ်ယူပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
၉။ အကြိုက်ပြော+ Voice Pack သည် သက်တမ်းကုန်လွန်သွားသည့်အခါ အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးပါသလား။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဇူလိုင် 30, 2018 ဩဂုတ် 3, 2019 Categories Voice mm
Xperia XA1 Plus and XZ1 FAQs MM
၁။ Sony Xperia XA1 and XZ1 ပရိုမိုးရှင်း ဆိုသည်မှာ။
Sony Xperia XA1 Plus and XZ1 ဖုန်းကို ပရိုမိုးရှင်းကာလတွင် ၀ယ်ယူခဲ့ပါက MPT မှအခမဲ့ငွေပမာန လက်ဆောင်များကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ရုံဖြင့် MPT အခမဲ့ငွေပမာနလက်ဆောင်များကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။(ပထမလအပါအဝင်)
အကယ်၍ MPT အသုံးပြုသူသည် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးသောအခါမှ ဆွေသဟာအစီအစဉ် (သို့) ရှယ်ပြောအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ အဆိုပါ (cash bonus-data only) ်အစီအစဉ် ထဲမှ ကျန်ရှိသော ငွေပမာန က်ို အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကို ဆက်လက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sony အရောင်းပြခန်းများ၊ Wai Yan စတိုးဆိုင်များ နှင့် Sony အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြည့်ငွေ ၅၀၀၀ကျပ် – အပို ၃၀၀၀ကျပ်
ဖြည့်ငွေ ၁၀,၀၀၀ကျပ် – အပို ၆၀၀၀ကျပ်
၁၅။ MPT SIM နှင့်တွဲ၍ bonus ရပြီးသား Sony XA1 Plus and XZ1 ကို နောက်ထပ် MPT SIM နှင့်တွဲပြီး ပြောင်းသုံးလျင် bonus ထပ်ရ၊ မရ
ပထမဆုံးတွဲ၍ bonus ရထားသော MPT SIM နှင့်သာ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် MPT SIM ပြောင်းသုံးလျင် bonus မရတော့ပါ ပထမဆုံးတွဲထားသော MPT SIM နှင့်သာ ၆ လဆက်တိုက်သုံးရမှာဖြစ်ပါသည်
Sony Xperia XA1 Plus and XZ1 ဖုန်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ MPT ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုနှင့် စတင်အသုံးပြုသည့် အချိန်မှစပြီး ၆ လအထိ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ။ ။ အသုံးပြုသူက October မှ စတင်အသုံးပြုပါကှNovember မှ February အတွင်းဖုန်းငွေမဖြည့်သည့်တိုင် March လအထိအကျုံးဝင်ပါသည်။
အဆိုပါ ဘောနက်စ်် သည်ပေးထားသောရက်မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း၃၀သက်တမ်းရှိပါတယ်။
၆။ Sony XA1 Plus and XZ1 စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်ပါလဲ။
Sony XA1 Plus စျေးနှုန်းက 349,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
Sony XZ1 စျေးနှုန်းက 888,000 ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Sony XA1 Plus and XZ1 များကို ဘယ်တော့ ၀ယ်ယူရရှိနို်င်မှာလဲ။
MPTံငွေအပို လက်ဆောင်များပါ၀င်သော Sony XA1 Plus နှင့်XZ1 ကို ၂ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ နေ့တွင်စတင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၁၀။ MPT ငွေအပို ်လက်ဆောင်များကိုမည်သို့ရယူမည်နည်း။
Sony XA1 Plus and XZ1 ဖုန်းကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ MPT ဆင်းမ်ကဒ်တစ်ခုခုနှင့်အတူ အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖုန်းဟန်းစက် ၏ SIM Slot (1) တွင် ထည့်ပြီး *268# ခေါ်ဆို၍ activate လုပ်ပြီး သက်မှတ်ထားသောငွေပမာနကိုဖြည့်၍ အပို internet data ကိုရယူနိုင်ပါသည်
ထို့နောက် တခြားလ data bonus များ အတွက် လစဉ်ဖုန်းငွေဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁၂။ Sony မှလက်ဆောင် ရောပေးပါသလား။
Sony မှ XA1 Plus ဝယ်ယူသူများကို Sony headphone လက်ဆောင်ပေးပါမည်။ ဖုန်းနှစ်မျိုးလုံးဝယ်ယူသူကို မကွဲမှန် နှင့် စီလီကွန် cover လက်ဆောင်ပေးမည်။
၁၄။ Bonus ရဖို့ activation လုပ်ခြင်း နှင့်မရခဲလျင်လုပ်ဆောင်ရမဲ့အချက်များ ။
၁၆။ တခြား MPT bonus ရပြီးသား MPT SIM ကိုသုံးပြီး ယခု Sony XA1 Plus and XZ1 handset တွင် MPT bonus နောက်ထပ်ရနိုင်ပါသလား။
နောက်ထက်မရနိုင်ပါ ၊ ဥပမာ Samsung S8/S8+ bonus ရထားသော MPT SIM card အနေဖြင့် Sony XA1 Plus တွင် bonus နောက်ထပ်မရနိုင်ပါ
Author MPT TelecommunicationPosted on အောက်တိုဘာ 31, 2017 ဇန်နဝါရီ 12, 2018 Categories Devices mm
MPT Co-Branded Handsets ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲ။
MPT CO-Branded handsets သုံးမျိုးရှိပါတယ်၊ M40၊ M50 နှင့် M50A ပါ။
အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် ကို ဘယ်အချိန်အထိရမှာပါလဲ။
SIM Card ကို စတင်အသုံးပြုသည့်အချိန်မှစပြီး ၆လစာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ဖုန်းအသုံးပြုသူဟာ MPT SIM Card ကို ဇန်နဝါရီလမှ စတင် activate ပြုလုပ်ခဲ့ပါလျှင် အဆိုပါ အင်တာနက် ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက် အသုံးပြုခွင့်ကို ဇွန်လအထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် သုံးစွဲသူသည် SIM Card ကို ဖေဖော်ဝါရီလမှစပြီး မေလအထိတိုင် TopUpမလုပ်နိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အကျုံးဝင်ပါတယ်။
အဆိုပါအခမဲ့ရရှိသော ဒေတာက ဘယ်တော့ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာလဲ။
အဆိုပါ ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက်သည် ပေးထားသောရက်မှစတင်၍ ရက်ပေါင်း၃၀သက်တမ်းရှိပါတယ်။
MPT Co-Branded Handsets တို့၏ စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်ပါလဲ။
M50A ၏စျေးနှုန်းက ၈၉၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
MPT Co-Branded Handsets တွင် မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပါလား။
MPT Co-Branded Handsets တွင်ဇော်ဂျီ မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်ပါသည်။
တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု Service Centers စာရင်းများ လင့်ခ်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
M50A ကိုတွဲလျှက်ပါရှိသော SIM Card နှင့်တွွဲသုံးရပါမည်။ SIM Card အသစ်ကိုဦးစွာ activate ပြုလုပ်ရပါမည်။ activate ဖြစ်ပြီးနောက် ငွေဖြည့်မှသာ Bonus ကိုရရှိပါမည်။
M50A ဖုန်းကို ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၀ယ်ယူခဲ့ပါက သင် MPT SIM Card တစ်ခုကို အခမဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MPT SIM card အခမဲ့နှင့်အတူ တစ်လလျှင် ၃၀၀၀ ကျပ်ငွေဖြည့်ရုံဖြင့် အင်တာနက် ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက် အသုံးပြုခွင့်ရပါမည် (ပထမလအပါအဝင်)။ အဆိုပါ ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက် အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကို တစ်လတစ်ခါဖြင့် ၆လတိတိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကိုရယူထားသူများသာ အဆိုပါ အင်တာနက်အစီအစဉ်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ MPT အသုံးပြုသူသည် ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုသို့ ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးသောအခါမှ ဆွေသဟာအစီအစဉ်ကို ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ အဆိုပါ ၂.၅ ဂစ်ဂါဗိုက် ထဲမှ ကျန်ရှိသောမီဂါဗိုက်ို အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ကို ဆက်လက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဒေတာကို အရင်စတင်အသုံးပြုရမှာလဲ။ အခမဲ့ရတဲ့ ဒေတာလား (သို့) ၀န်ဆောင်ခပေးထားတဲ့ဒေတာလား။
အခမဲ့ရရှိသောဒေတာကို အမြဲတမ်း အရင်ဆုံးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ handset ကို ဘယ်မှဝယ်ယူလို့ရလဲ။
MPT အမှတ်တံဆိပ် ဆိုင်များ၊ Super Mobile ဖြန့်ဖြူးထားသောဖုန်းဆိုင်များ နှင့်နီးစပ်ရာ အရောင်းဆိုင်များတွင် သွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အခြား SIM ကဒ်များကို MPT Co-Branded Handsets တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ဟုက်ကဲ့၊ အသုံးပြု၍ ပါသည်။ SIM နံပါတ်(၂) တွင််အခြား SIM ကဒ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် SIM နံပါတ်(၁) တွင််MPT SIM ကဒ်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
မည်ကဲ့သို့သော application များကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားပါသလဲ။
MPT 4U, LoTaYa, Facebook, Viber, LINE, Win Zinn, Ye’ & Calculator(Myanmar version) တို့ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။
အခြား accessories များပါသလဲ။
Earphone, Power Charger, Screen cover, Silicon cover and temper glass တို့ပါဝင်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on မတ် 16, 2017 မတ် 17, 2017 Categories Devices mm